काठमाडौं – ‌बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद नेपालको चार दिने सद्भावना भ्रमणमा छन् । मंगलवार काठमाडौं आइपुगेका राष्ट्रपति हमिद भ्रमण सकेर शुक्रवार स्वदेश फर्किने छन् ।
भौगोलिक सीमा नजोडिएपनि बंगलादेश नेपालबाट निकै नजिकको देश हो । यी दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध त छँदैछ, व्यापारिक हिसाबले पनि केही हदसम्म सन्तुलित सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।
वि‍.सं. २०५४ मा नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट भारतको फूलबारी भन्सार हुँदै बंगलादेशको बंगलाबन्ध जोड्ने ५४ किलोमिटर लामो स्थल मार्ग प्रयोगमा आएदेखि यी दुई देशबीचको व्यापारमा तीव्रता आएको हो । त्यस यताका १७ वर्ष नाफामा रहेको बंगलादेशसँगको व्यापार पछिल्लो पाँच वर्षयता घाटामा चल्दै आएको छ ।
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ देखि आव २०७५/७६ सम्ममा नेपालले काँकडभिट्टा भएर ३१ अर्ब ३० करोड ५५ लाख ६९ हजार ८ सय ३७ मूल्य बराबरको सामान बंगलादेश निर्यात् गरेको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीको तथ्यांक छ ।
सोही अवधिमा बंगलादेशबाट २६ अर्ब ८४ करोड ३६ लाख १६ हजार ३ सय ६७ बराबरको सामान आयात भएको छ । यसरी हेर्दा २२ वर्षको अवधिमा बंगलादेशसँग नेपालको व्यापार ४ अर्ब ४६ करोड १९ लाख ५२ हजार ४६१ नाफामा रहेको देखिएपनि ५ वर्षयता अवस्था फेरिएको छ ।
नाफा अन्त्य भएर घाटा बढ्ने क्रममा आव २०७५/०७६ मा नेपालले २ अर्ब ४१ करोड ३० लाख ३५ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा विगत ५ वर्षदेखि व्यापार सन्तुलन बंगलादेशको पक्षमा रहेको बताउँछन् ।
बंगलादेश निर्यात गर्नका लागि नेपालसँग पर्याप्त मात्रामा उत्पादित वस्तु नभएका कारण आयात धेरै हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।
ओझाले लोकान्तरसँग भने, ‘बंगलादेशमा निर्यात् गर्नका लागि नेपालमा पर्याप्त मात्रामा वस्तुको उत्पादन नै भएको छैन ।’
उत्पादित वस्तुहरू पनि प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा बंगलादेशसँगको व्यापारमा निराशाजनक स्थितिमा पुगेको उनको भनाइ छ ।
नेपालबाट बंगलादेशमा सामान निकाशी गर्दा भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध समेत हुने गरेको छ । नेपालबाट धेरै मात्रामा कृषिजन्य र प्राथमिक वस्तुहरू निकासी हुन्छन् ।
कृषिजन्य वस्तु निकासी गर्न त्यहाँ भन्सार शुल्क बढी छ, त्यसैकारण यस्ता वस्तुहरू त्यहाँ जान सक्दैनन् । यसका साथै गैरभन्सार अवरोधका कारण पनि निकासी घटेको उनको ओझाको भनाइ छ ।
बंगलादेशको रोजाइमा मात्रै सीमित वस्तु नेपालबाट त्यसतर्फ निर्यात् हुने गरेको बताउँदै उनले बंगलादेशसँगको व्यापार सन्तुलनमा यसको पनि प्रभाव रहेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालले आफूखुशी सामान लैजान पाउँदैन, उनीहरूको रोजाइका बस्तुमात्रै लैजाने गरेको हुँदा सीमित मात्रै जान सक्छ ।’
बंगलादेशसँगको नेपालको कनेक्टिभिटी पनि सहज नभएको उनको भनाइ छ । काँकडभिट्टा–फूलबारी–बंगलावनको बाटो हुँदै बंगलादेशमा सामान निर्यात गरिन्छ ।
खासगरी भारतको बाटो हुँदै जानुपर्ने र यातायातको पनि सहज अवस्था नभएकाले व्यापार विस्तारमा कठिनाइ देखिएको उनी बताउँछन् ।
‘यातायातको मात्रै समस्या घटाउन सक्ने हो भने पनि व्यापार सन्तुलनमा केही सहयोग हुन्छ, यसका लागि सरकारले पहल गर्न सक्छ,’ ओझाको सुझाव छ ।
नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुमा बढी झमेला व्यहोर्नुपर्ने गुनासो आउने गरेको उनले सुनाए । ती झमेलाहरूलाई समाधान गर्नतर्फ लागे वस्तुको निर्यात बढाउन सकिने उनको सुझाव छ ।
बंगलादेशबाट नेपालमा बढी मात्रामा जुस, फलफूल लगायतका वस्तुहरू आयात हुन्छ । नेपालबाट भने औषधि, जडीबुटी, कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात हुने गरेको छ ।
बंगलादेश र नेपालले धेरै वस्तुलाई साफ्टाको सम्वेदनशील सूचीमा राखेका छन् । यो सूचीबाट निर्यातयोग्य वस्तु हटाउनु पर्नेमा पूर्व सचिव ओझाको जोड छ ।
उनले भने, 'जेलाई पनि संवेदनशील वस्तुको सूचिमा राख्दा भन्सार शुल्क महंगो पर्ने गरेको छ, जसका कारण नेपालबाट पर्याप्त मात्रामा निर्यात हुन सकेको छैन । सरकारले यस विषयलाई ध्यानमा राखेर छलफल चलाउनुपर्छ ।’
बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीच २०१५ मा मोटर भेहिकल एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भएको थियो । अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले यो सम्झौताको कार्यान्वयन मात्रै गराउन सकेमा यातायात आवागमन सहज हुने उनको उनी बताउँछन् ।
बंगलादेशी राष्ट्रपतिको ४ दिने औपचारीक भ्रमणमा खास विषयमा कुनैपनि छलफल तय भएको छैन । त्यसो त हमिद सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुन् । बंगलादेशमा पनि नेपालमा जस्तै प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी छन् ।
नेपाल र बंगलादेशबीचको भन्सार प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा पूर्वसचिव ओझाको जोड छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशको भन्सारलाई सहज बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै नेपाल र बंगलादेशबीचको वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन र प्रभावकारी ढंगले काम गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने ओझाले बताए । उनका अनुसार नेपालबाट बंगलादेशमा निर्यात हुने खास वस्तुहरूको पहिचान गरी निकासीमा देखिएका अवरोधलाई हटाउन दुवै देशका सरकार सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
विद्युत्ले फेर्नसक्छ तस्वीर !
नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको प्रचुर सम्भावना छ ।
नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने हो भने सन् २०४० भित्र ९ हजार मेघावाट विद्युत् नेपालबाट आयात गर्न सकिने भनेर बंगलादेशले औपचारिक रूपमै भनिसकेको छ ।
यद्यपि हालसम्म नेपाल आफैं विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर भइसकेको छैन । सुख्यायाममा भारतबाट विद्युत् आयात भइरहेकै छ ।
निर्माणाधीन केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा छिट्टै नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने विश्वास गरिएको छ ।
उनीहरूलाई चाहिएको समयमा सहज तबरले विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं यो विषयमा सरकारले अलि बढी ध्यान दिनुपर्नेमा अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीको जोड छ ।
लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले विद्युत्को लागतमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी अघि बढे व्यापार सम्भव हुने बताए ।
‘बंगलादेशले बर्माबाट विद्युत् ल्याउँछ, उसको मूल्यसँग हाम्रो मूल्यले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ, नत्र त उसले बर्माबाटै ल्याउने भयो नि, यहाँको किन आवश्यक पर्‍यो र ?’ उनले भने ।
विद्युत परियोजनाहरू विभिन्न कारणले समयमा सम्पन्न नहुने, निर्धारित लागतमा सम्पन्न नहुने जस्ता नराम्रो चरित्र नेपालमा देखिएको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउने पर्ने उनले बताए ।
‘यातायात पनि भारतको भूमि हुँदै जाने हुनाले पूर्वाधारको संरचनामा भारतले थोरै मात्रै तलमाथि गरिदिएपनि व्यापारमा अवरोध हुने अवस्था छ, यस्तो खाले अवरोधलाई हटाउन नेपालले भारत र बंगलादेशसँग नै छलफल तथा सहमति गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले थपे ।
नेपालले बनाएको संरचनालाई प्रयोग गर्न भारतलाई समेत मनाउनुपर्ने भएकाले यी सबै मिलेमा अबको ५ वर्षमा नेपालले सहज रूपमा विद्युत आपूर्ति गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । बंगलादेशमा नेपालको व्यापार सम्भावना अत्यन्तै उच्च छ, त्यसलाई नेपाली स्तरमा नै विकास गर्नुपर्छ ।
भारतको सम्बन्धलाई एउटा ट्र्याकमा राखिराख्न सरकारले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विद्युत् उत्पादन गर्दा भरपर्दो एवं मौद्रिक रूपमा पनि सस्तोमा आपूर्ति हुने गरी उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले औल्याएँ ।
आगामी ४ दिन मनसुनी गतिविधि बढ्ने, सतर्क रहन आग्रह
बााह्रबीसेमा उद्धार टोली खटाउन देउवाको आग्रह, तत्काल खट्न पार्टी पंक्तिलाई पनि अपिल
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २० सहयोग
नबिल बैंक र हुवावे टेक्नलोजीज् बीच रणनैतिक साझेदारी सम्झौता
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा प्रदेश २ लाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १० लाख सहयोग
प्रदेश अस्पतालका ४ स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण
अमेरिका र चीनले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ : वाङ यी
सभामुख सापकोटालाई लिएर बाह्रबीसेतर्फ उडेको हेलिकप्टर खराब मौसमका कारण धुलिखेलबाटै फिर्ता
बाह्रबीसेमा पहिरो : अहिलेसम्म २० जना बेपत्ता, उद्दारका लागि काठमाडौंबाट हेलिकप्टर उड्यो